04/01/2016 - 05/01/2016 - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း မိုင် ၂၀ အကြီးစားပြင်ဆင်မှုစတင်
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ရက် ၁၀၀ စီမံချက်ကာလအတွင်းရန်ကုန် - မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမှ လမ်းမိုင် ၂၀ ကို အဆင့်မြှင့်တင် ပြုပြင် တည်ဆောက်သွားမည်
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ရက် ၁၀၀ စီမံချက်ကာလအတွင်းရန်ကုန် - မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၏ မိုင်တိုင် ၁၅/၀ မှ မိုင်တိုင်၂၅/၀ ထိလမ်းပိုင်းနှင့် မိုင်တိုင် ၁၆၃/၀ မှ မိုင်တိုင် ၁၇၃/၀ ထိလမ်းပိုင်းစုစုပေါင်းလမ်းမိုင် ၂၀ ကို အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင် တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
"လမ်းအရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိမိအနေဖြင့် ရဲရဲဝံ့ဝံ့အာမခံကြောင်း၊ အစိုးရသစ်တက်ပြီး နောက်ပိုင်း လမ်းတစ်လမ်းသည် ၅ နှစ်မခံပါက တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာအား ထိရောက်စွာအရေးယူသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း" ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က ရန်ကုန် - မန္တလေး အမြန်လမ်း ယာဉ်မတော် တဆ ဖြစ်ပွားမှု လျော့ချရေးရက် (၁၀၀) စီမံချက် စတင်ဆောင်ရွက်သည့် အခမ်းအနားတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်း မီဒီယာများနှင့် တာဝန်ရှိသူများအားပြောကြားသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားကိုယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန် - မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်တိုင် (၁၇၃/၁)၌ ကျင်းပရာ ရှေးဦးစွာ လမ်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကြည်ဇော်မြင့်က အမြန်လမ်းမကြီး၏ ရက် (၁၀၀) စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေများကိုရှင်းလင်းသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကရက် (၁၀၀) စီမံချက်အရဆောင်ရွက်မည့် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင် ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း စီမံကိန်းအား အလံငယ်ဝှေ့ယမ်း၍ စတင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည်။ ဆက်လက် ၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကလုပ်ငန်းတစ်ခုဆောင်ရွက်မည်ဆိုလျှင် ပြည်သူလူထုစိတ်ဝင်စားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ပြည်သူ လူထုစိတ်ပါဝင်စားမှု ရှိရန် ဆောင်ရွက် သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ၌ အစိုးရ အဖွဲ့သစ်တစ်ရပ်တက်လာလျှင် အစိုးရသစ်၏ စွမ်းဆောင်မှု တစ်ရပ်အဖြစ် ရက် (၁၀၀) လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဟူ၍ရှိကြောင်း၊ ရက် (၁၀၀) အတွင်း ဖြစ်မြောက်နိုင် မည့် မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ယခုရက်(၁၀၀) အတွင်းရန်ကုန် - မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၏ ၁၅/၀ မိုင် မှ ၂၅/၀ မိုင် ထိလမ်းပိုင်းနှင့် ၁၆၃/၀ မိုင်မှ ၁၇၃/၀ ထိလမ်းပိုင်း စုစုပေါင်း လမ်းမိုင် ၂၀ ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင် တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြေခံစံနှုန်းတစ်ခုရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုစံနှုန်းကိုရယူပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် အမြန်လမ်းမကြီး၃၆၆ မိုင်၃ဖာလုံတွင်ကုန်ကျမည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ပြည်သူ လူထုထံပွင့်လင်းမြင်သာစွာ အစီရင်ခံတင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၄င်းအပြင် ၀န်ကြီးဌာန၏ ရက် (၁၀၀) စီမံချက်၌ အထပ် ၅ ထပ်တွင် အခန်း ၄၀ ပါဝင်သည့် စံနမူနာ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း အပါအ၀င် ပြည်သူများ အိမ်ဂရမ်လျောက်ထားခြင်းကို ဆောလျင် စွာ ဆောင်ရွက်ပေးရေး အစီအစဉ်လည်း ပါဝင်ကြောင်းပြောကြားပြီး အခမ်အနားသို့ တက်ရောက်လာသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများ၏ မေးမြန်းချက်များကို ပြန်လည် ရှင်းလင်းဖြေကြားသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးဖောက်လုပ်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရနှင့် အမေရိကန် အစိုးရတို့၏ သဘောတူစာတမ်းအရ နိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ အင်ဂျင်နီယာ အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် လူဝီဘာဂျာနှင့်အဖွဲ့ (Louis BerGer& Associates) သည် ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့အကြား ခေတ်မီလမ်းတစ်လမ်း ဖောက်လုပ်ရေး အတွက် "ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အကြိုလေ့လာရေး လုပ်ငန်း" ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၆၀ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းအဆိုပါ အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာ အဖွဲ့သည်" ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းစီမံကိန်း ပဏာမ အင်ဂျင်နီယာ အစီရင်ခံစာ" ကိုမြန်မာအစိုးရသို့တင်ပြခဲ့သည်။ ထိုစဉ်ကအဆိုပြုထားသည့် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းသည် (၂) လမ်းသွားအဆင့် ဖြစ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည့် ရိုးမတောင်ခြေလမ်းအူကြောင်းသစ်အရ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး တည်ဆောက်ရေးအတွက် ယခင်ပြည်ထဲရေး၊ သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူပေါင်းအကောင်ထည်ဖော် သွားရန်ဖြစ်ပြီး ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်- မန္တလေး အမြန်လမ်းဖောက် လုပ်ရေး လုပ်ငန်းအတွက် လမ်းအူကြောင်း ရှာဖွေတိုင်းတာခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တစ်ပြိုင်တည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအမြန်လမ်းသည် လှေလှော်အင်းမှမိတ္ထိလာအထိ ခန့်မှန်းအလျားမိုင် ၃၀၀ ခန့်ရှိပြီး ၁၉၇၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီ(၁)ရက်မှစတင်၍ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မတ်(၃၁)ရက်ထိ (၁၀)နှစ်တာ ကာလအတွင်း အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် လှေလှော်အင်းအနီး လမ်းအစပိုင်း ၃ မိုင် ၁ ဖာလုံခန့်ကို (၄) လမ်းသွားကွန်ကရစ်လမ်းပိုင်းနှင့် ၄င်းလမ်းပေါ်ရှိ ကွန်ကရစ်တံတား (၃) စီးသာ တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပြီး စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်း သွားခဲ့သည်။
ယင်းနောက် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ယခုရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်လမ်း စီမံကိန်းပဏာမလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် လမ်းအူကြောင်း ရှာဖွေခြင်းနှင့် အသေးစိတ်တိုင်းတာပုံထုတ်ခြင်း စသည့်အကြိုအင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ခုနှစ် မတ်လ (၃၀) ရက်တွင်ကျင်းပသည့် အထူးစီမံကိန်းများ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၏ အစည်းဝေးအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၄) က (၄) လမ်းသွားကတ္တရာလမ်းမကြီးအဖြစ် တည်ဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်အရရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးဖောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာအကြို အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာပင် ကွန်ကရစ် လမ်းမကြီးအဖြစ် ဆက်လက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်-နေပြည်တော် လမ်းပိုင်းဖြစ်သည့် အမှတ်(၃)လမ်းဆုံမိုင်တိုင်(၀/၀)မှ မိုင်တိုင် (၈၃/၆)ထိနှင့် မိုင်တိုင်၁၇၃/၁မှမိုင်တိုင် ၂၂၁/၁ ထိကိုပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကလည်းကောင်း၊ မိုင်တိုင်(၈၃/၆)မှမိုင်တိုင် (၁၇၃/၁) ထိကို စစ်အင်ဂျင်နီယာ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးကလည်းကောင်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
နေပြည်တော်-မန္တလေးပိုင်းဖြစ်သည့် မိုင်တိုင်(၂၂၁/၁)မှ မိုင်တိုင် (၃၀၄/၀) ထိကို စစ်အင်ဂျင်နီယာ ညွှန်ကြားရေးမှူရုံး ကလည်းကောင်း မိုင်တိုင် (၃၀၄/၀) မှ မိုင်တိုင် (၃၆၆/၃) ထိကို ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကလည်းကောင်းတည်ဆောက် ခဲ့ကြသည်။
ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးသည် မိုင်ပေါင်း(၃၆၆)မိုင်၊ (၃)ဖာလုံရှည်လျားပြီးရန်ကုန်-ပဲခူး-နေပြည်တော်-မန္တလေးစသည့် တိုင်းဒေသကြီး (၄)ခုကိုဆက်စပ်လျက်ရှိကာ မြို့နယ်ပေါင်း (၁၅)ခု၊ ကျေးရွာပေါင်း(၁၅၆)ရွာနှင့် ဆက်စပ်နေသော မြို့နယ်/ ခရိုင်ခွဲများသို့ သွားလာနိုင်သည့်လမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်-နေပြည်တော်- မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးကို စတင် တည်ဆောက်စဉ်က (၈) လမ်းသွားဟု သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် (၄)လမ်းသွားအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပြီး (၈) လမ်းသွားအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန်မြေသားလမ်းကိုဆောက်ရွက်ပြီး ဖြစ်သည်။
ကျပ် သိန်း ၁၀၀ အောက် တန်ဘိုးနည်း စံပြအိမ်ရာ စီမံကိန်းတစ်ခု တည်ဆောက်မည်
ကျပ် သိန်း ၁၀၀ အောက်ခန့်မှန်းထားသည့်ငါးထပ် အဆောက်အဦး အခန်း ၄၀ ပါတန်ဘိုးနည်း စံပြအိမ်ရာ စီမံကိန်းတစ်ခုကို မေလ(၁)ရက်နေ့မှစတင်တည်ဆောက်မည်
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်မြေနေရာတွင် တန်ဘိုး ကျပ် သိန်း ၁၀၀ အောက်ခန့်မှန်း ထားသည့် ငါးထပ်အဆောက်အဦအခန်း(၄၀)ပါ တန်ဘိုးနည်းစံပြအိမ်ရာစီမံကိန်း တစ်ခုကိုမေလ (၁)ရက်မှ စတင်၍ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဧ။် ရက်(၁၀၀)အတွင်းအကျိုးရှိစေမည့် ရေတိုစီမံချက် စံပြ အိမ်ရာ စီမံကိန်းတစ်ခုအနေဖြင့်နေပြည်တော်ရှိဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်မြေနေရာတွင် တည်ဆောက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ် ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်ကပြောကြားခဲ့သည်။
" ကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ရက်(၁၀၀)အတွင်းအကျိုးရှိစေမဲ့ ရေတိုစီမံချက်ဖြစ်တဲ့ လမ်းတံတားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအပြင် ပြည်သူ့အိမ်ရာလုပ်ငန်းတွေ ဒါတွေကိုလည်း ကျွန်တော် တို့ လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို အရင်တုန်းကတော့ ဆောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာ တန်ဘိုးနည်းအိမ်ရာဆိုပြီးတော့ တန်ဘိုးက မနည်းဘူးဖြစ်နေတယ် တန်ဘိုးကနည်းနည်းများနေတယ် ၊တကယ်တော့ လူထု တွေမတတ်နိုင်တဲ့ တန်ဘိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တယ် ။ကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့သိချင်တယ် ဒါကြောင့်မို့ ရက်(၁၀၀)စီမံကိန်းထဲမှာ ငါးထပ် အခန်း ၄၀ ပါ စံနမူနာဖြစ်တဲ့ တန်ဘိုးနည်းအိမ်ရာတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ ဆောက်မှာပါ ။ဆောက်ပြီးတော့ ဒီအပေါ် မှာ စံချိန်စံညွှန်းတွေယူပြီးတော့ တန်ဘိုး ဘယ်လောက်ထိနည်းနည်း ကျွန်တော်တို့က ဆောက်ပေး လို့မယ်ဆိုတာ စံချိန်စံညွှန်းယူမှာဖြစ်ပါတယ် ။နောက်ပိုင်း ဒီစံနမူနာအတိုင်း ဆောက်လို့ အဲဒီ စံချိန်စံ ညွှန်းနဲ့လည်းကောင်းရမယ် တန်ဘိုးနည်းတဲ့အဆင့်လည်းရောက်ရမယ် ဒီစီမံကိန်းကို ရက် ၁၀၀ အ တွင်းမှာ ငါးထပ် အခန်း ၄၀ ပါ အဆောက်အဦးတစ်ခုကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဘဲ ဆောက် လုပ်ပြီးတော့ ပြီးစီးတဲ့အခါမှာလည်း သတင်းမီဒီယာများကိုခေါ်ပြပါမယ် ။ခေါ်ပြပြီးတော့ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာရဲ့ အဆောက်အဦး အရည်အသွေးရယ် ကုန်ကျစရိတ်ရယ် ကျွန်တော်တို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြ ပါမယ် ကုန်ကျစရိတ်က ကျပ် သိန်း ၁၀၀ ကုန်တယ်ဆိုလည်း သိန်း ၁၀၀ ပေါ့ ကျပ်သိန်း ၇၀ ကုန် တယ်ဆိုလည်း သိန်း ၇၀ ပေ့ါ တတ်နိုင်သလောက် တန်ဘိုးနည်းအိမ်ရာတန်ဘိုးကို ချပြီးလုပ်ပါမယ် ဒီလိုနေရာမှာတော့ အဆောက်အဦး တစ်လုံးထဲဆောက်ရင်တော့ တန်ဘိုးက နည်းနည်းများပါမယ် အဲဒါကတော့နေရာဒေသတွေအပေါ်မှာတော့နည်းနည်းလေးမူတည်ပါတယ်။ဒီလိုစံပြအိမ်တစ်အိမ် ဆောက်လို့ရသွားပြီဆိုရင်တော့ အခြေခံစံနှုန်းတစ်ခုတော့ရသွားမယ် တန်ဘိုးနည်း အိမ်ရာဆိုသည်မှာ ဘယ်လောက်နဲ့ဆောက်လုပ်ရတယ်ဆိုတာ ၀န်ကြီးဌာန တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးလိုက်လို့ရတယ် ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ရာအခက်အခဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ဖြေရှင်းပေးရမယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်တော်တို့က တာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့ ခံယူထားပါတယ် ဒါကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမှာဖြစ်ပါတယ်" ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဧပြီလ(၃၀)ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကရန်ကုန်-နေပြည်တော်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး ဆောက် လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဧ။် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုလျော့ချရေး ရက်(၁၀၀)စီမံချက်စတင်ဆောင်ရွက်သည့်အခန်းအနားဖွင့်ပွဲ၌ သတင်းမီဒီယာများအားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အိမ်ခြံမြေ ဂရမ်လျှောက်ထားမှုအား ၄၅ရက်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဆိုသည့်သတ်မှတ်ချက်ကို မေလ(၁)ရက်နေ့တွင် သတ်မှတ်ကြေညာသွားမည်
အိမ်ခြံမြေ ဂရမ်လျှောက်ထားမှုအား ၄၅ ရက်အတွင်း ဆောင်ရွက် ပေးရမည်ဆိုသည့် သတ်မှတ်ချက်ကို မေ၁ရက်တွင် သတ်မှတ်ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ် ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၇၃ မှ ၁၇၃/၇ ကြားတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဆောက် လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဧ။် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုလျော့ချရေး ရက် ၁၀၀ စီမံချက် စတင်ဆောင်ရွက်သည့်အခန်းအနားဖွင့်ပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က" ပြည်သူတွေအရမ်းစိတ်ဝင်စားတာတစ်ခုရှိသေးတယ် အိမ်ခြံမြေ ဂရမ်သွားလျှောက်တဲ့အ ခါမှာ ပိုက်ဆံတွေကုန်ပြီးတော့ အဆင့်တွေများပြီးတော့ တော်တော်နဲ့လည်းမရဘူးပေါ့နော် ၊အဲဒါကို လည်းပြည်သူလူထု ကျွန်တော်လည်းပြည်သူလူထုပါဘဲ ကျွန်တော်လည်းခံစားခဲ့ရပါတယ် တော်တော် များများမေးကြည့်တော့လည်း အဲဒီလိုပါဘဲ အိမ်ခြံမြေ ဂရမ်သွားလျှောက်ရင် ပိုက်ဆံလည်းကုန်တယ် အချိန်လည်းကုန်တယ် ရချင်မှလည်းရမယ်ဆိုတော့ အနေအထားကိုဖြေဖျောက်ပြီးတော့ ရက်၁၀၀ စီမံ ကိန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ခြံမြေ ဂရမ်လျှောက်တဲ့ ဂရမ်အမျိုးအစားတွေရှိတယ် ၊အဲဒီအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ မေလ (၁)ရက်နေ့ကစပြီးတော့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကြေညာပါမယ် ၊သတင်းစာထဲမှာလည်းကြေညာပါမယ် ပြည်သူတွေအားလုံးသိအောင်လည်းကြေညာပါမယ် ရုံးရှေ့တွေမှာလည်းကပ်ထားပါမယ် ဒီလို ဂရမ်းမျိုး (၇)ရက်ကြာရမလား (၇))က်ပါဘဲ နှစ်ပတ်ဆိုရင် နှစ်ပတ် ၊ ၁၅ ရက်ဆိုရင် ၁၅ ရက် ၊ ၂၂ ရက်ဆိုရင် ၂၂ ရက် စသည်ဖြင့် ပေါ့ ကျွန်တော်ကတော့ ၄၅ ရက် မကျော်စေရလို့ပြောထားပါတယ် ဒါကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဆောင်ရွက်ပါမယ် ဒါဆိုရင် တော်တော်များများ ဂရမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြည်သူလူထု တွေ အများကြီး စိတ်ထဲမှာ အစိုးရဌာနတွေအပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့စိတ်ထဲမှာသိပ်ပြီးတော့ ၀မ်းမသာတဲ့ကိစ္စတွေကိုဝမ်းသာတာတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထား တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောချင်ပါတယ် "ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
အိမ်ခြံမြေ ဂရမ်လျှောက်ထားမှုအား ၄၅ ရက်အတွင်း ဆောင်ရွက် ပေးရမည်ဆိုသည့် သတ်မှတ်ချက်ကိုလည်း ပြည်သူအများသိရှိရန်အတွက် မေလ(၁)ရက်နေ့မှစတင်၍သတင်းစာ ထဲမှကြေညာခြင်း၊အစိုးရရုံးများဧ။် ရှေ့ကြေညာဘုတ်များ၌ကပ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက သတင်း မီဒီယာများအား တရားဝင်ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းက ' ကရင်ပြည်နယ်က တိုက်ပွဲတွေမှာ (AA) တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ကျနော်တို့ဘက်ကနေ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သလို ကျနော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း ဘ၀တူတိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ် " ဟု ကရင်အမျိုးသား မီဒီယာ ကို ယနေ့တွင် အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်သည်တော်များအချင်းချင်း တိုက်နေကြသည့် တိုက်ပွဲဖြစ်သောကြောင့် အရပ်သားများ ထိလိုက်စေမည့်လုပ်ရပ်များကို လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ဟုလည်း ဖြည့်စွက်ပြောဆိုခဲ့သည်။
(DKBA) နှင့် (AA) တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ယခင်ကလည်း နယ်စပ်ဒေသများတွင် ပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုလည်း ဗိုလ်မှူးကြီးဆန်းအောင်က ပြောဆိုသည်။
သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ - ကရင်အမျိုးသား မီဒီယာ (facebook)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စဉ့်ကိုင်မြို့ ဖါးလင်ပိုးကျောင်းတိုက်မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ စစ်ကိုင်းမြို့က Myanmar Veneer အလုပ်သမားသပိတ်စစ်ကြောင်းက အလုပ်သမားတွေကို နေပြည်တော် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူတွေက သပိတ်ရပ်နားဖို့ပြောကြားခဲ့ပေမယ့် အလုပ်သမားတွေက လက်မခံဘဲ ဆက်လက်ချီတက် ဆန္ဒပြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ခုံသမာဓိကောင်စီရဲ့ ကြားနာစစ်ဆေးမှုကို ခံယူမှာဖြစ်ပေမယ့် အလုပ်သမားတွေရဲ့ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမှုကို ရပ်နားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင် ကိုခိုင်မင်း က ပြောပါတယ်။
နေပြည်တော် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနက ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်ဌေးဝင်းနဲ့ အဖွဲ့ဟာ နေ့အပူချိန်ပြင်းတာကြောင့် ဆန္ဒပြအလုပ်သမားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် သပိတ်ကို ရပ်နားပြီး ခုံသမာဓိကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခံယူဖို့ သွားရောက်ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် မေလ ၂ ရက်နေ့မှာ ခုံသမာဓိကောင်စီက စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar Veneer စက်ရုံမှာ လုပ်သက်အလိုက် ကျွမ်းကျင်ကြေး၊ လုပ်သက်ခံစားခွင့်၊ ရက်မှန်ကြေး၊ စားစရိတ် ၊ နေစရိတ်၊ အကြိုအပို့စရိတ်တွေကို ခံစားခွင့်ရရှိမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက်တွေကို အလုပ်ရှင်ဘက်က ဖေါက် ဖျက်တဲ့အတွက် အလုပ်သမားတွေက ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြရာ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမား ၁၇ဝ နီးပါးကို ၃ ကြိမ် ခွဲပြီး အလုပ်ကနေ ထုတ်ပယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီစက်ရုံဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားပိုင်တဲ့ စက်ရုံဖြစ်ပြီး အလုပ်သမား ၂ဝဝ ကျော်နဲ့ လည်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
သန်မြန်သူ (ဖားဆောင်း-လွိုင်ကော်) ယာဉ်လိုင်း ခရီးသည်တင်ကားသည် ဧပြီ ၂၉ မွန်းလွဲ ၂း၃၀ အချိန်တွင် လွိုင်ကော်မှ ဖားဆောင်းသို့ ကုန်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်လာစဉ် ဘောလခဲမြို့နယ် မယ်စလောင်းတောင်အဆင်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၄၉/၃ နှင့် ၁၄၉/၄ အကြား ဘောလခဲမြို့နှင့် ၅မိုင်ခန့်အကွာတွင် ကားဘရ်ိတ်ပေါက်၍ ဘောလခဲမြို့မှ ရေခဲချောင်းရောင်း၍ လွိုင်ကော်မြို့သို့ ပြန်လာသည့် ဦးထွန်းနိုင် အသက်(၄၀) ခန့် မောင်းနှင်လာသည့် (Kenbo 110 )အမျိုးအစား (၃၆ယ ၉၂၁၇၃) မော်တော်ဆိုင်ကယ်အား တိုက်မိသဖြင့် ဦးထွန်းနိုင်သည် တိုက်မိသည့်နေရာတွင်ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့သည်။
ယာဉ်နောက်လိုက် မောင်းတူး အဘ ဦးမြတ်ကြိုင် အသက်(၁၇) လွိုင်ကော်မြို့ (ဧက၅၀၀) နေသူ ယာဉ်တိမ်းမှောက်စဉ် ယာဖက်ဝမ်းဗိုက် အူပွင့် ဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ ဝဲဖက်တင်ပါး ပွန်းပဲ့ ဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ ညာဒူ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ တစ်ချက်ရရှိခဲ့သည်။
စိုးရိမ်ရသဖြင့် လွိုင်ကော်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ဘောလခဲ ဆေးရုံမှလွဲပြောင်း ကုသမှုခံယူရန်ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
ယာဉ်မောင်းသူမှာ ပြည့်ဖြိုးအောင် အသက်၂၆ (ဘ)ဦးသန်းစိုး
လွိုင်ကော်မြို့၊နမ့်ဘော်ဝမ်ကျေးရွာနေဖြစ်ပြီး နစ်ဆန်းအမျိုးအစား ယာဉ်အမှတ် ၂ခ/ ၇၃၇၅ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ကို ဘောလခဲမြို့မ ရဲစခန် ဒုရဲမှူး ဦးစိုးလွင်မှ (ပ)အမှတ် ယာဉ် ၁/၂၀၁၆ ပြစ်မူဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇၉/၃၃၈/၃၀၄ (က) စခန်းမှူးမှ တရာလို ပြုလုပ်တိုင်တန်းပြီး အမှုဖွင့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
အင်းလေးကန် ရေထွက်နဲ့ ကျွန်းမျောတွေပေါ်မှာ ဟိုတယ်ဆောက်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အင်းလေးကန်ရဲ့ ဇီဝမျိုးစိတ်တွေ၊ ငှက်တွေနေထိုင်ဖို့ နေရာတွေပျောက်ဆုံးပြီး မျိုးသုဉ်းသွားမှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် ကန့်ကွက်တာဖြစ်တယ်လို့ မိုင်းသောက်ကျေးရွာက ဒေသခံ ဦးသာယာက ပြောပါတယ်။
"အဓိက ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရခြင်းက အင်းလေးဒေသမှာနေရှိတဲ့ ဇီဝမျိုးစိတ် ငှက်တွေက အဲ့ဒီမှာနေဖို့နေရာတွေမှာ သူတို့ အဲ့ဒီဟိုတယ်ကြီးဆောက်လို့ရှိရင် အဲ့ဒီငှက်တွေနေဖို့ နေရာရှိတော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး၊ ဟိုတယ်လာဆောက်လုပ် ကန့်ကွက်နေရခြင်း မဟုတ်ပါဘူးဗျ၊ သဘာဝမျိုးစိတ်တွေ ပျောက်ပျက်ပြီး ပျက်သုဉ်းသွားမှာ ကျနော်တို့ မလိုချင်လို့ပါဗျ၊ အဲ့ဒီ ဟိုတယ် ဆောက်ချင်ဆောက်ပေါ့ဗျာ၊ ကျွန်းမျှောလေးတွေ မပျက်စီးရအောင် ဘယ်လိုမျိုး ထိန်းသိမ်းပေးမလဲ ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုး အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်လို့ပါဗျ"
Naing Group ကုမ္ပဏီက ဟိုတယ်ဆောက်လုပ်နေတဲ့နေရာဟာ အင်းလေးကန်အနီးမှာဖြစ်ပြီး ဆောက်လုပ်ခွင့်ရထားတဲ့ မြေဧက ၅ဝ ထက် ကျော်လွန်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဟိုတယ်ဆောက်တဲ့နေရာဟာ ညောင်ရွှေမြို့နယ် မိုင်းသောက်အင်းရွာနဲ့ ဖက်ပုန်းရွာတွေက အဓိကထားအသုံးပြုနေတဲ့ စိမ့်စမ်းရေထွက်ပါ ပါဝင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြတဲ့ ဒေသခံတွေဟာ အင်းလေးကန်ကို သနားဖို့၊ ကျွန်းမျောတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့၊ ဇီဝမျိုးစိတ်တွေ၊ ငှက်တွေကို မျိုးမသုန်းအောင်ကာကွယ်ဖို့နဲ့ အင်းလေးကန်စပ်မှာ ဟိုတယ်တွေ အလိုမရှိကြောင်း စာတန်းတွေ ကိုင်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
Naing Group ကုမ္ပဏီက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မေလမှာ လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒေသခံတွေက ကန့်ကွက်နေတဲ့အတွက် လတ်တလောမှာ ရပ်နားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
၃၀၊၄၊၂၀၁၆ ရက်နေ့ မနက်က၊ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်သည့် ၊ ရနောင်းမြို့၊ SIFCO Group ပင်လယ်စာ၊ အအေးခန်း၊ စက်ရုံတွင်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမများ၊ စက်ရုံသို့ အလုပ်ဆင်းရန်၊ ကားစောင့်နေစဉ် မတော်တဆ၊ ကားတိုက်မှု့ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကားတိုက်မှု့ကြောင့် ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမ (၃) ဦးပွဲခြင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ ပြီး၊ ( ၁)ဦးမှာ ဆေးရုံတွင် သေဆုံးခဲ့သည်။ (၈) ဦးမှာ အရေးပေါ်လူနာအဖြစ်၊ ဆေးကုသခံယူလျှက်ရှိသည်။
ရနောင်းမြို့အခြေစိုက် ရွှေ့ ပြောင်း အလုပ်သမားအရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူများမှ ထိုင်းဥပဒေအရ၊ အကူအညီပေးနိုင်ရန်၊ ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိူးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း(FED)သို့ အကူအညီတောင်းခံခဲ့သည်။
FEDအနေနှင့်လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ စုဆောင်းထားရန် အကြံပေးပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ထိုင်းရှေ့နေတစ်ဦး သွားရောက် ကူညီရန် ပြင်ဆင်လျှက်ရှိသည်။ ရနောင်း ယာဉ်တိုက်မူ့တွင် သေဆုံးသွားရှာသော ကံဆိုးလေသူ ထားဝယ်အမျိုးသမီး ၄ဦး
(၁) မဖြူဖြူလွင် . ပြင်းဖြူကြီးရွာ .သရက်ချောင်းမြို့
အဘ ဦးလှလွင် အမိ ဒေါ်ကျင်မွှေး
ဝဲကျွန်းဆင်ဆိပ်ရပ်ကွက် . ထားဝယ်မြို့
အဘ ဦးဆုအေး အမိ ဒေါ်ကျင်သိန်း
အဘ ဦးကြည်စိန် အမိ ဒေါ်သန်းရှင်
အဘ ဦးမောင်ထူး အမိ ဒေါ်လှကြည်
ဓါတ်ပုံ။ ကိုလင်းဦး။ ရနောင်းမှ ပေးပို့သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်သိလိုက အဆိုပါအမှု့ ကိုလိုက်လံ ကူညီပေးနေသည့် ကိုဟိန်းထက် ( ၀၈၃၆၄၂၄၅၈၂) သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်နိုင်ပါသည်)။
မှတ်ချက်။ ။ ရနောင်းမှာ ပေးပို့လာသည့် သတင်းအရ သေဆုံးသူမှာ ( ၅) ဦးဟုသိရသော်လဲ တစ်ချို့ ၏ပြောပြချက်မှာ ( ၄) ဦးဟုသိရသည်။)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ၆၂×၆၃ လမ်းကြား၊ ဖိုးရာဇာလမ်းနှင့် ကနောင်မင်းသားကြီး လမ်းကြား၊ (ဈ)ရက်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(H-96) ရှိ Hi-Star ဂတ်စစ်မီးခြစ်စက်ရုံတွင် ဧပြီ ၃၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၃၅ မိနစ်က ဂတ်စ်မီးခြစ်များ မီးခြစ်၍ အရည် အသွေးကောင်းမကောင်း စမ်းသပ်ရာမှ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၅၀ မိနစ်တွင် မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့သည်။ မီးလောင်မှုကြောင့် RC သွပ်မိုးမြေစိုက် ၅၀×၁၀ပေ အဆောက်အဦတစ်လုံး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။
အဆိုပါမီးလောင်ရာသို့ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့်အဖွဲ့၊ မြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မီးငြိမ်း သတ်ယာဉ်(၁၀)စီး၊ အုပ်ချုပ်မှု့ယာဉ်(၁)စီး၊ သန္ဓေမီးသတ်(၂၀)ဦး၊ အရန်မီးသတ်(၄၀)ဦးနှင့် ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများ ၀ိုင်းဝန်းငြိမ်းသတ်ခဲ့ပြီး မီးလောင်မှုကြောင့် အလုပ်သမား မနှင်းသန္တာမြင့် (ဘ) ဦးလှမြင့်အား ပြည်ကြီး တံခွန်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရွာသစ် ဧပြီ ၃၀
ဧပြီလ (၂၉) ရက် ည (၇) နာရီ မိနစ် (၄၀) က ယင်းမာပင်မြို့မ စခန်းမှာ ဒုရဲအုပ်သန်းမြတ်စိုး တာဝန်မှုးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန် မုံရွာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ကံစုကျေးရွာက လူတစ်ဦး အဆိပ်သောက် သေဆုံးပြီး ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရ သက်သေတွေနဲ့ အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ သေဆုံးသူမှာ ယင်းမာပင်မြို့နယ် ကံစုကျေးရွာနေ အသက် (၄၀) အရွယ်ရှိ ဝင်းစိုး ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကံစုကျေးရွာနေ ဝင်းစိုး ဟာ တောင်သူလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ပြီး အိမ်ထောင်ရှိကာ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလခန့်က တစ်ရွာတည်းနေ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ နောက်အိမ်ထောင်ပြုကာ ရွာမှ ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဧပြီလ (၁၆) ရက်က နောက်အိမ်ထောင်ပြုထားသူနဲ့ အတူ ရွာကိုပြန်လာစဉ် မယားကြီးနဲ့ မယားငယ်တို့ စကားများရန်ဖြစ်ကြရာကနေ ယောကျာင်္းဖြစ်သူ ဝင်းစိုးမှာ စိတ်ညစ်ပြီး အလူမီနီယံဖော့စဖိတ် ပဲစဉ်းငုံ ပိုးသတ်ဆေးပြား တစ်ပြား သောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
အော့အန်နေတာ ကို သိရှိပြီး မုံရွာပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ပို့ဆောင်ဆေးကုသစဉ် သေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သေမှုသေခင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေဆုံးတဲ့ အကြောင်းရင်မှန်ကို စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ ဒုတိယရဲအုပ်သန်းမြတ်စိုး က တရားလိုပြုလုပ်ပြီး ယင်းမာပင်မြို့မရဲစခန်းက သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၆) နဲ့ အမှုဖွင့်ကာ ယင်းမာပင်မြို့မ ရဲစခန်းမှုး ဒုတိယရဲမှုးအောင်ကျော်ထူးက စုံစမ်းစစ်ဆေး နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
သတင်းစာသား ..... မျိုးဝင်းထွန်း ( မုံရွာ)
ပြီးခဲ့သည် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ချောင်းသာကမ်းခြေရှိ Woody House KTV ၌ အမှတ် ၂၇ ခြေလျင် တပ်ရင်းမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိုးမြင့်ဦးနှင့် အရပ်သားနှစ်ဦးက သေနတ်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ပြီး ဆိုင်ဝန်ထမ်းများအား နှိပ်စက်ကာ ၀န်ထမ်းမိန်းကလေး တစ်ဦးကို အလိုမတူဘဲ သားမယားပြုကျင့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အမှုတင်တာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ တပ်ရင်းမှူးကိုတော့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက စစ်ဆေးတာပါ။ ဒီလိုအမှုတွေဖြစ်လာရင် စစ်စည်းကမ်းနဲ့ အရေးယူမလား တပ်ကိုအရင်မေးရတယ်။ အခုက စစ်စည်းကမ်းနဲ့လည်း အရေးယူထားပြီလို့ သိရတယ်”ဟု ပုသိမ်ခရိုင်တရားသူကြီး ဒေါ်မိုးမိုးအေးက ပြောသည်။
ပုသိမ်ခရိုင်တရားရုံးက ရန်နိုင်အောင်နှင့် အဖော်ပါလာသူ ဝေလင်းတို့အား မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် စတင် စစ်ဆေးရန်ရုံးချိန်း ပြန်လည်ခေါ်ဆိုထားပြီး ၎င်းတို့ နှစ်ဦးအား ပုသိမ်အကျဉ်းထောင်တွင် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားကြောင်း ပုသိမ်ခရိုင်တရားရုံးမှ သိရသည်။
“ဒီလုပ်ငန်းတွေကလည်း ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြား လုပ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဆိုတော့ ဒေသအတွက်လည်း မကောင်းဘူး။ ဒီဆိုင်တွေကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အတိုင်း ဖြစ်စေချင်တယ်။ စည်ကမ်းနဲ့ မညီရင်လည်း အရေးယူပေးစေချင်တယ်” ဟု ချောင်းသာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုတေဇာအောင်က ပြောသည်။
မှုခင်းဖြစ်စဉ်ကို စတင်တိုင်ကြားသူမှာ KTV ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်တွင် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်ခံရပြီး အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ်ပါ ပြုကျင့်ခံခဲ့ရသူ မိန်းကလေးက တရားလိုအဖြစ် တိုင်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ချောင်းသာရဲစခန်းက (ပ) ၃၄/၂၀၁၆၊ ကျင့် ၁၇၂(၁)အရ ရဲစခန်းတွင် အမှုရေးဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်အတွက် ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသူ ရန်နိုင်အောင်နှင့် အဖော်ပါ လာသူ ဝေလင်းတို့အား ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆ (မုဒိမ်းမှု)၊ ၃၇၇ (ဓမ္မတာနှင့်ဆန့်ကျင်သော ကာမဆက်ဆံမှု)၊ ၅၀၆ (ရာဇ၀တ်မှုမကင်းသော ခြောက်လှန့်မှု)၊ ၃၂၃ (သာမန်နာကျင်စေမှု)၊ ၁၁၄ (အားပေးကူညီပူးပေါင်း ကြံစည်မှု) တို့ဖြင့် ပုသိမ်ခရိုင် တရားရုံးက စစ်ဆေးနေပြီး အမှတ် ၂၇ ခြေလျင် တပ်ရင်းမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိုးမြင့်ဦးအား စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးက စစ်ဆေးနေကြောင်း ပုသိမ်ခရိုင်တရားရုံးမှ သိရသည်။
ချောင်းသာကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ် ၃၇ ရှိ အောင်ပင်လယ်ကုန်းအနီး ကရင်မချောင်းအတွင်း ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံထားရသည့် တောဆင်ရိုင်းအထီး တစ်ကောင်အား ဒေသခံ ၀ါးခုတ်လုပ်သား ဦးထွန်းကတွေ့ရှိ အကြောင်းကြားလာသဖြင့် သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများက သွားရောက် စစ်ဆေးပြီး ဆင်သတ်ဆင်စွယ်ဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့က လာရောက်အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း ချောင်းသာရဲစခန်းမှ သိရသည်။
“ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီး အစွယ်ယူသွားပုံရတယ်။ ပြတ်သွားတဲ့ နှာမောင်းကို ဆင်သေရဲ့ အရှေ့မြောက် ပေနှစ်ဆယ်လောက်မှာ တွေ့တယ်”ဟု ချောင်းသာသစ်တော ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ် ၃၅ မှ ၆၇ အထိ တာဝန်ခံဖြစ်သော တောအုပ်ဦးလေးအောင်က ပြောသည်။
ခေါင်းပြတ်သေဆုံးလျက် တွေ့ရှိသော တောဆင်ရိုင်းအထီးမှာ အသက် ၂၅ နှစ်ခန့်ဖြစ်ပြီး အမြင့် ၇ ပေ ၆ လက်မ ၊ ကိုယ်ထည် လုံးပတ် ၁၂ ပေ၊ ခန္ဓာကိုယ် အလျား ၉ ပေ ရှိကြောင်း သစ်တောဦးစီးဌာန တွေ့ရှိချက်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
ဆင်မှာစတင်တွေ့ရှိစဉ်ကပင် ဦးခေါင်းပြတ်နေပြီး ညာဘက် တင်ပါးဆုံရိုးတွင် အရှည် ၈ လက်မ အနက် ၃ လက် မ ခန့်ပြတ်ရှဒဏ်ရာ တစ်ခုရှိကာ နှာမောင်းကိုအရင်းမှ ဖြတ်ထားသဖြင့် လူနှင့်ဆင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးမှ သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပုသိမ်မြို့နယ် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သေဆုံးခဲ့သော ဆင်မှာလူတစ်ဦး တစ်ယောက်၏လက်ချက်ဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရသောကြောင့် ဖော်ထုတ်အရေး ယူပေးရန် ငွေဆောင်မြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တောအုပ်ဦးလေးအောင်က ချောင်းသာနယ်မြေရဲစခန်းသို့ တိုင်တန်းလာသဖြင့် (ပ) ၃၉/၁၆၊ သစ်တောနှင့် တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇(က) ဖြင့်အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်တံတားမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူနေအိမ်ခန်းများပါဝင်ပြီး လက်ရှိတွင် နေထိုင်သူ ၈၀ဦးခန့်ရှိသော အဆိုပါ ကိုလိုနီခေတ်လက်ရာ နှစ်ထပ် အဆောက်အအုံကို ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ အထိ အများပြည်သူ ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“အများမြင်သာတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်လည်းဖြစ်၊ ဆရာလူထုစိန်ဝင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့ နေရာလည်းဖြစ်၊ အဆောက်အအုံ ကလည်း ရန်ကုန်မြို့အစောပိုင်းကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ မူလလက်ရာဖြစ်ပြီး ဗိသုကာလက်ရာအားဖြင့်လည်း ကောင်းမွန်ထူးခြားတဲ့အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါ” ဟုရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဒေါ်မိုးမိုးလွင်ကဆိုသည်။
"ကျွန်တော်တို့က အင်းလေးကပါ။ ကျွန်တော်တို့ အင်းလေးဒေသ ရိုးရာနည်းနဲ့ ပြုပြင်နေတာပါ။ ဒီအတွက် အင်းသားတွေကိုခေါ်ယူပြီ ကျွန်တော်တို့ဒေသကလိုပြုပြင်ဖို့ တိုင်းအလုံးပေါင်း ၆၀၀ ကျော် အခုချပေးထားပါတယ်”ဟု အင်းသားအဖွဲ့ အလုပ်သမားခေါင်ဆောင် ကိုစိုင်းနော်ထွန်းက ပြောသည်။
အမရပူရမြို့က ဦးပိန်တံတားကြီးဟာ နှစ်ပေါင်း ၁၆၀ ကျော်ပြီဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုဒဏ် ရေဒဏ်အမျိုးမျိုးကို နှစ်ပေါင်းများစွာခံခဲ့ရသဖြင့် တံတားကြီး၏တိုင်လုံးအချို့ ဆွေးမြေ့လာသဖြင့် တိုင်အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း၊ ကျမ်းခင်း အသစ်လဲခြင်းများကို စတင်ပြုလုပ်နေပြီး မိုးဦးမကျမီ အပြီးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေး ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနမှ သိရသည်။
ထိုသတ်မှတ်ချက်များအရ အိန္ဒိယတွင် မီးဘေးကာကွယ်ရန် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ၆ နာရီအတွင်း ထမင်းဟင်းမချက်ရန်တားဆီးခဲ့ပြီး ဘာသာရေး အရမီးပူဇော်မှုကိုလည်း တားဆီးထားရကြောင်းသိရသည်။
ထိုတားဆီးချက်များကိုဖောက်ဖျက်ပါက ထောင်ဒဏ် ၁နှစ်အထိချမှတ်နိုင်သည်ဟု ဥပဒေတစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားကြောင်းသိရသည်။
အိန္ဒိယ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် အရ ယနေ့အထိ အိန္ဒိယပြည်သူ သန်း ၃၃၀မှာ ပြင်းထန်သောရေပြတ်လပ်မှုဒဏ်ကို ခံစားနေရကြောင်းနှင့် ယခုနှစ် နွေရာသီမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ရာသီဥတုသမိုင်းတွင် နှစ် ၁၀၀အတွင်း အပူချိန်အပြင်းဆုံးရာသီဥတုဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းဒေသများတွင် လက်ရှိအပူချိန်မှာ ၄၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်လွန်နေသဖြင့် ဒေသအာဏာပိုင်များက နေ့လယ် ၁၁ မှ ၂ နာရီအတွင်း အပြင် မထွက်ရန် တိုက်တွန်းထားကြောင်း Global Times သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
လက္ကောင်းကြီးကျေးရွာနေ ပိုင်ရှင်ဦးလင်းလင်း၏ ငါးမွေးမြူရေးခြံရှိ နွားစာများထားရှိသော သက်ကယ်မိုး အဆောက်အဦးတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ မီးသတ်ယာဉ်နှင့် ရေသယ်ယာဉ် (၂) စီး၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ မီးသတ်ယာဉ်တစ်စီးနှင့်အတူ သန္ဓေမီးသတ် (၆)ဦး၊ အရန် မီးသတ် (၁ဝ) ဦး၊ အဆိုပါခြံရှိ အလုပ်သမားများနှင့် ကျေးရွာသူ/သားများပူးပေါင်း၍ ငြိမ်းသတ်ခဲ့ရာ ၁၀ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မီးလောင်မှုသည် အခြားသို့ကူးစက်လောင်ကျွမ်းမှုမရှိသည့်အပြင် တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု မရှိကြောင်း သိရှိရပြီး ပိုင်ရှင်ဦးလင်းလင်းအား မတ္တရာမြို့မ ရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
"ရေတွင်းထဲ အမှိုက်ဆင်းဆယ်ရင်း အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီး လူသေတယ်လို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆီက ဖုန်းနဲ့ အကြောင်းကြားလာလို့ သွားစစ်ဆေးတာ အမှိုက်ဆင်းဆယ်တဲ့သူက အသက်ရှူကျပ်လာတယ်လို့ အော်ပြောတော့ သူအစ်မနဲ့ သူ့သားက ကြိုးကိုဆွဲတင်တာ ပြုတ်ကျပြီး အောက်ဆီဂျင် ပြတ်သေဆုံးသွားတာ'' ဟု သိမ်ဆိပ်နယ်မြေ ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဖြစ်စဉ်တွင် ဒေါ်ပုလဲ ၅၀ နှစ် (ဘ) ဦးထွန်းခင် နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းရှိ လေးပေအကျယ် ကွန်ကရစ်ပိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အနက် ၂၄ ပေရှိ ရေတွင်းထဲ၌ အမှိုက်များရှိနေသဖြင့် မောင်တော်စပ်သူ ဦးထွန်းအေး (ခ) ဖိုးချီး ၄၂ နှစ် (ဘ) ဦးထွန်းခင်က အမှိုက်များ ဆင်းဆယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဆင်းဆယ်ရာ ရေတွင်းထဲ၌ အောက်ဆီဂျင် ပြတ်သဖြင့် အသက်ရှူမရကြောင်း အော်ဟစ်ပြောဆိုသဖြင့် အစ်မဖြစ်သူနှင့် သားဖြင့်သူတို့က ကြိုးအားဆွဲတင်ရာ ကြိုးပြတ်ကျသဖြင့် ဦးထွန်းအေးမှာ ရေတွင်းထဲတွင် သေဆုံးသွားကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သိမ်ဆိပ်နယ်မြေရဲစခန်းက ဓမ္မတာအတိုင်းသေဆုံးခြင်း ဟုတ်/ မဟုတ် သိရှိစေရန် သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် ၁/၂၀၁၆ ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြာင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဒေါ်ပုလဲ၏ နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းရှိ အကျယ် (၄) ပေ၊ အနက် (၂၄) ပေခန့်ရှိသည့် ကွန်ကရစ်ခွေဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရေတွင်းထဲ၌ အမှိုက်များရှိနေသဖြင့် ၎င်း၏ မောင် တော်စပ်သူ ဦးထွန်းအေး (ခ) ဖိုးချီး ၄၂နှစ် (ဘ) ဦးထွန်းခင်မှ ကြိုးဖြင့် တွင်းထဲဆင်း၍ အမှိုက်များ ဆယ်ပေးရာ အသက်ရှုမရကြောင်း အော်ဟစ်ပြောဆိုသဖြင့် အစ်မဖြစ်သူနှင့် ဦးထွန်းအေး၏ သားဖြစ်သူတို့မှ ကြိုးအား ဆွဲတင်ကူညီရာမှ ကြိုးပြတ်ကျပြီး ဦးထွန်းအေးမှာ ရေတွင်းထဲရှိ ရေအနက် ၂ ပေခန့်တွင် အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ကာ သေဆုံးသွားကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဦးထွန်းအေးမှာ ဓမ္မတာအတိုင်းသေဆုံးခြင်းဟုတ် မဟုတ် သိရှိရန် သုဝဏ္ဏဝတီမြို့၊ သိမ်ဆိပ်နယ်မြေရဲစခန်းမှ သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် ၁/ ၂၀၁၆ ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြာင်း သတင်းရရှိသည်။
နော်ဝေနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျမှုကြောင့် ၁၃ ဦးသေဆုံး
နော်ဝေနိုင်ငံသား ၁၁ ဦး၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၁ ဦး နှင့် အီတလီနိုင်ငံသား ၁ ဦး လိုက်ပါလာသည့် Super Puma ရဟတ်ယာဉ် သည် နိုင်ငံပိုင် ရေနံနှင့် ဓါတ်ငွေ့ ကုမ္ပဏီ Statoil က မြောက်ပင်လယ်တွင် လုပ်ဆောင်နေသည့် ရေနံလုပ်ကွက် Gullfaks B မှ Bergen ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းသို့ ပျံသန်းနေစဉ် Turoy ကျွန်းနားတွင် ပျက်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နော်ဝေနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ပူးတွဲကယ်ဆယ်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု စင်တာ (JRCC) ကပြောကြားခဲ့သည်။
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းအား JRCC မှ ဦးဆောင် ၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် JRCC က ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများကို ပျောက်ဆုံးနေသူ နှစ်ဦးအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက် နေသော်လည်း အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သည့် လက္ခဏာများ မတွေ့ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ပျက်ကျမှုကြောင့် ရဟတ်ယာဉ် သည် လုံးဝပျက်စီးသွားပြီး အချို့အစိတ်အပိုင်းများသည် မြေပြင်ပေါ်၌ လည်းကောင်း၊ ရေထဲ၌ လည်းကောင်း ပြန့်ကျဲလျက်ရှိကြောင်း JRCC ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ က အစောပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
မျက်မြင်တွေ့မြင်ခဲ့သူများ၏ ပြောကြားချက်အရ ရဟတ်ယာဉ်သည် မြေပြင်နှင့် ထိမိချိန်တွင် ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒလက် လေးလက်နှင့် အင်ဂျင် နှစ်လုံးပါ Super Puma ရဟတ်ယာဉ် အား မြောက်ပင်လယ်ရှိ ရေနံတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများသို့ လူနှင့် စက်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုကြကြောင်း သိရသည်။
NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ၀ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ ၀ ဒေသပန်ဆန်းတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အရေးပါသည့် ခြေလှမ်းဟု လေ့လာသူများဆို
၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံကိုလပိုင်းအတွင်း ကျင်းပမည်ဟု နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကြေငြာခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် အရေးပါသည့် ခြေလှမ်းတရပ်အဖြစ် NLD ပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးဌေး ( အငြိမ်းစား စစ်သံမှူး ) ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် UWSA ၀ တပ်ဖွဲ့ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဦးရှောက်မီလျှံဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာ ဧပြီ ၂၇ နှင့်၂၈ ရက်နေ့က ၀ ဒေသမြို့တော် ပန်ဆန်း ( ပန်ခမ်း )တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
၀ ဒေသအခြေစိုက် ၀ ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းဌာတွင် ဖော်ပြချက်အရ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
' ၂၆ ကတည်းက ရောက်တယ် ။ ၂၇ နဲ့ ၂၈ မှာတွေ့တယ်။ ဦးရှောက်မီလျှံတို့ ဦးကျောက်ကျူံးတန်းတို့လည်းပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ၀ ကလည်း အရေးကြီးတော့ အန်အယ်လ်ဒီကလည်း ကြေငြာထားတော့ လာတွေ့ပြီး ဘာအခက်ခဲရှိနိုင်တယ် ၀ ရဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ အခက်ခဲတွေက ဘာဆိုတာ ဆွေးနွေးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အထောက်ကူဖြစ်စေတဲ့ ဆွေးနွေးမှုလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ' ဟု ၀ တပ်ဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သည့် တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် စစ်ရေးနိုင်ငံရေး အကဲခတ်တဦးမှ The Ladies News သို့ ပြောဆိုသည်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနက် အင်အားအကြီးဆုံးနှင့် ထိန်းချုပ်နယ်မြေအကျယ်ပြန့်ဆုံး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် UWSA ၀ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော်မှာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးတွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း မရှိသေးသည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအပေါ် အတန်အသင့် သြဇာရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးထားမှုမရှိသေးသော်လည်း လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမ ရှိသေးသည့်အဖွဲ့များနှင့် ပြီးခဲ့သည့် မတ်လကအစည်းအဝေးတရပ်ပြုလုပ်ထားပြီး အစိုးရသစ်နှင့် အမြန်ဆုံးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးလိုကြောင်း ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အခြေနေအရ အပစ်မရပ်သေးသည့်အဖွဲ့များနှင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရန် ၊ နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးနေသည့်အဖွဲ့များနှင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေမှု စသည့် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိနေပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံနှင့်အပစ်မရပ်သေးသည့်အဖွဲ့များ ညီလာခံတွင်ပါဝင်လာရေးတို့မှာ တပြိုင်နက်တည်းဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားထားပါသည်။
တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တွင် အခြေစိုက်သည့် ၀ တပ်ဖွဲ့မှာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးတွင် ပါဝင်ခွင့်ပြုရန် ငြင်းဆန်ခြင်းခံထားရသည့် MNDAA ကိုးကန့်အဖွဲ့နှင့်လည်း အလွန်နီးစပ်သော မဟာမိတ် ဆက်ဆံရေးရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ၀ ၊ ကိုးကန့် ၊ မိုင်းလားစသည့်အဖွဲ့များမှာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ ခွဲထွက်လာသည့် အဖွဲ့အစည်းများလည်း ဖြစ်ကာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းမရှိသေးသော အဖွဲ့များလည်း ဖြစ်ပါသည်။
လေ့လာသူ အချို့ကမူ အပစ်ရပ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ရန် အန်အယ်လ်ဒီအနေဖြင့် တပ်မတော် ၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့နှင့်ပါ ပြေလည်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဆိုထားပြီး ၀ တပ်ဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံမှုမှာ အပြုသဘောဆောင်သည့် ခြေလှမ်းအဖြစ် ရှူမြင်သုံးသပ်မှုများရှိနေသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနစ်ကလည်း ရန်ကုန်ကို လာရောက်သည့် ၀ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပြီး ပြီးခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကာလကလည်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရှိ ၀ လူမျိုးများနေထိုင်ရာ ဒေသရှိ မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ၀ တိုင်းရင်းသားများ၏ မဲဖြင့် အန်အယ်လ်ဒီကိုယ်စားလှယ်အချို့မှာ အနိုင်ရရှိခဲ့ဖူးပါသည်။
NLD အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၀ ဒေသသို့သွားရောက်ခဲ့သူ ဦးစိုးဌေးမှာ တပ်မတော်တွင် ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပြီး မလေးရှား ၊ ရုရှားနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့တွင် စစ်သံမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပါသည်။
၁၀ ဦးကိုလည်း အတွင်းလူနာအဖြစ် ရနောင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ကုသပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သတင်း - ဓာတ်ပုံ – ကျော်မင်းထိုက်
သတင်း - ဓာတ်ပုံ ။ ။ သိန်းထွန်းအောင် (Red Cross)